नेपाल आज | अाठ सय उम्मेदवार, पन्ध्र पृष्ठको मतपत्र, कसरी हाल्ने मत ?
अाठ सय उम्मेदवार, पन्ध्र पृष्ठको मतपत्र, कसरी हाल्ने मत ?
साथै उनीहरुले मतपत्रमा छापिएको आफ्नो तस्बिर पनि टेलिभिजन र पत्रिकामार्फत प्रचार गर्ने गरेका छन् । प्रचार सामग्रीमा उम्मेदवारहरुले ‘यो तस्बिर यति पेजमा छ हेर्नुहोला’ भनेर आफ्नो तस्बिर चिनाउने गरेका छन् । -एजेन्सी
तर यस चुनावमा पनि पहिलेजस्तै तालिवान र इस्लामिक स्टेटले कारबाही गर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले मतदान केन्द्रमा पनि हमला गरिरहेका छन् । उनीहरुले मतदान गर्न नजान सर्वसाधारण नागरिकलाई भनिरहेका छन् ।